Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Tavoahangy varahina nanosotra menaka famenon'ny rindrina
Io menaka manitra varahina feno fikosoham-bary io dia nohamarinina tamin'ny taona CE.
Ny endrika fanoratana azy dia ahafahana ampiasaina. Izy io dia manana làlana azo zahana hifanaraka amin'ny toerany samihafa, mety ho 360 ° rotate, ny lavaka mihodina mety ho miverina miodina rehefa tsy mampiasa
2311200RB torolàlana fametrahana
Sobom-bary mamelana, mason-tsavony feno fofona: vata famenoana vilany 2311200RB dia misy ny famolavolana ny lafiny roa, ny sandam-pandeha miampy ny tànana roa, ny lavaka tokana, ny faucet bozin'ny indostrian'ny lakozia azo avy amboarina raha tsy ampiasaina, mahomby amin'ny famonjena sy ny mahandro .
Famaranana ny krôma: tsara tarehy kirihitra vita amin'ny krôle vita amin'ny rano any an-dakozia, tsy feta sy tsy vovoka, fisaintsainana be sy ny takelaka misy vovoka, ny mpanasa fotsiny dia afaka manasa azy.
Neoperl aerator: manome tsindry maharitra sy mivantana mikoriana rano, tsindrona tsindry avo kokoa ajan'ny tsimokaretina tsy dia miraoka, dripaka ary tsimoka.
Ny antoka, serivisy ho an'ny mpanjifa: ny antoka 5 taona ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hita. Nofafana tamin'ny famerenam-bola 90 andro.
SKU: 2311200RB Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Volon-tsolika voahosotra menaka, Mpanefy vilany, Fitondrana tokana
15.6 X 9.5 X 2.2 santimetatra
Aforeto / Tanana 2 / Fitaovam-piadiana
Lehibe antsy antsy
Varotra / trano fisakafoanana / toeram-ponenana / An-trano / lakozia
Fantsona fantsom-panafody / mpampifandray NPT; Neoperl ABS aerator; Fitaovana mitaingina (bolongana vatofantsika vatofantsika ny Fischer alemanina)